Nagarik Shukrabar - ‘मेन्टेन गर्नै गाह्रो’
मङ्गलबार, २६ कार्तिक २०७६, ०१ : १३
‘मेन्टेन गर्नै गाह्रो’
आइतबार, ०२ मङि्सर २०७५, ०४ : १९ | भोला अधिकारी
म्युजिकल रियालिटी सो ‘नेपाली तारा’ दोस्रो सिजनको विजेता भएपछि दर्शक–स्रोतामाझ निकै लोकप्रिय भए सन्तोष लामा । उनै लामासँग शुक्रबारका भोला अधिकारीले गरेको सुर संवादः
गीत–संगीतमा नै व्यस्त छु । भर्खरै चार वटा चलचित्रका गीत गाएर सकेँ । अब दसैँअघि दुई वटा आफ्नै गीतलाई बजारमा ल्याउने तयारी गरिरहेको छु । गीतको रेकर्डिङ भइरहेको छ । सके भिडियोसहित, नसके पनि अडियो बजारमा ल्याउने योजना छ ।
अहिले त भिडियोको जमाना आइसक्यो । अडियो मात्र ल्याएर त के होला र ?
एउटा गीतको अडियो भिडियो गर्न तीन लाख भन्दा बढी खर्च हुन्छ । यस्तो खर्चले कलाकार त खुत्रुक्कै हुन्छन् । त्यसैले भिडियो तत्काल ल्याउँछु भन्न सक्दिनँ ।
व्यस्त छु भने पनि गुमनामै हुनुहुन्छ त !
गुमनाम छैन । ‘नेपाली तारा’ हुञ्जेल पत्रपत्रिका, अनलाइन र टेलिभिजनमा छाइरहेँ । अहिले सञ्चार माध्यमबाट ओझल पर्न थालेँ । गीत निकाले पनि म मिडिया नजिक हुन सकिनँ । त्यही भएर हराएजस्तो देखिएको हो । तर म कतै हराएको छैन । मैले हिजो जति गीत गाउँथेँ, अहिले पनि उत्तिकै गाइरहेको छु । महिनामा ३÷४ वटा भन्दा बढी गीत बजारमा आइरहेको छ ।
कस्तो खाले गीत गाउन रुचाउनुुहुन्छ ?
विशेषगरी मेलोडियस गीत आउन मन पर्छ तर जस्तो पनि गीत पनि गाउँछु । गायक भएपछि सबैखाले गीत गाउनसक्नु पर्छ नि, हैन र ?
पछिल्लो समयमा बजारमा ल्याउनु भएको बटुवा गीत कत्तिको चल्यो त ?
धेरै हिट त भएन । मेरा नियमित स्रोतले भने मन पराएको प्रतिक्रिया पाएको छु । २÷३ महिना जति भयो होला रिलिज भएको । यो दार्शनिक प्रकारको गीत हो । यस्तो गीत युवापुस्तामा चाँडै भिज्दैन ।
आफूले गाएको गीतको म्युजिक भिडियोमा आफैँ मोडलिङ गर्नुहुन्छ । पैसा जोगाउन कि अभिनयको सोख हो ?
मोडल बन्ने कुनै सोख छैन । मलाई एक्टिङ गर्ने रहर पनि होइन तर कहिलेकाहीँ गीत रचनाकारले, निर्देशकले गीत रचना गर्दा होस् या निर्देशन गर्दा कसलाई यो गीतले मागेको छ भन्ने हुन्छ । उहाँहरुले तपाईंले गाउनु भएको गीतमा तपाईं आफैँ अभिनय गर्नुस् भन्नु भएकाले अभिनय गरेको हुँ ।
गायन क्षेत्रमा कसरी आकर्षित हुनुभयो ?
जुन उमेरमा गीतसंगीतको भाव बुझ्न थालेँ, त्यही बेलादेखि यसप्रति आकर्षित भएँ । जतिलाई मैले गीत गाएर सुनाउँथेँ सबैले गायक नै बन्छस् भनेर हौसला दिनुहुन्थ्यो । यही प्रेरणाले काम ग¥यो ।
नेपाली तारा जितेपछि जीवन कत्तिको सहज भयो ?
केही समयसम्म सजिलो नै थियो तर मेन्टेन गर्दै जान गाह्रो हुँदै गयो । अहिले जेनतेन जीवन चलाइरहेको छु । बाहिरबाट हेर्दा जति सजिलो देखिन्छ, भित्र जीवन धान्न गाह्रो छ । सन्तोष भनेपछि धेरैले चिन्नुहुन्छ । साधारण भएर हिँड्न पनि गाह्रो, मेन्टेन गर्न पनि गाह्रो ।
हिट भइसकेका गायकको हालत पनि यस्तो ! किन हो ?
पहिलो पटक भएको सोहरु निकै हिट हुन्छन् । उसका फ्यानहरु पनि प्रसस्तै हुन्छन् । दोस्रो हुँदा मान्छेको मन अलिक मर्दै गएको हुन्छ । यस्तै त हो नि भन्ने पर्ने रहेछ । नेपालमा नेपाली तारा भयो । सबैको वाहवाही पायो । दोस्रो भयो ठीकै जस्तो माने । तेस्रो भयो, वास्तै गरेनन् । अब नेपाल आइडल पहिलो हुँदा जति आममानिसको क्रेज थियो । अहिले दोस्रोमा त्यस्तो पाइन छोड्यो । नेपाल टेलिभिजनबाट आउने पहिलो ‘छमछमी’मा कति क्रेज थियो । ‘बुगीबुगी’ चल्यो, ‘छमछमी २’ लाई दर्शकले त्यति महङ्खव दिएनन् । अहिले ‘भ्वाइस अफ नेपाल’ निकै हिट छ । त्यसैले पहिलो भनेको पहिलो नै हुने रहेछ ।
राजेशपायललाई गीत चोरीको आरोप
गीत रेकर्ड भएको एक दशकपछि ‘निष्ठुरीले माया गरी आफैँलाई जोगी बनाएँ’ बोलको गीत विवादमा परेको छ। सो गीतका गायक तथा संगीतकार मुरलीधरले गीत रेकर्ड गर्न र गाउन राजेश पायल राईले अनुमति नै नलिएको खुलासा गर्दै राईले अनुमतिबिना नै गाएको बताएका छन्।
सेलिब्रिटीका सरप्राइज सेलिब्रेसन
गत साता सामाजिक सञ्जालमा उनीसहित नेपाली चलचित्रका परिचित केही अनुहार सहितको तस्बिर सार्वजनिक भयो। सेतै ड्रेसमा सजिएका थिए उनीहरु। तस्बिर खिच्नुको प्रयोजन देखियो, ब्याचलर पार्टी।
फिल्म चलाउन ट्रोल बनाउँदा विवादमा ‘घामड शेरे’, निश्चलको कमजोर संवाद
फिल्म चलाउने लोभमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई जोडेर विवादमा तानिएको फिल्म ‘घामड शेरे’ को ट्रेलर यूट्युवमा हेर्नेको संख्या राम्रै देखिएको छ । शुक्रवार रिलिज हुने फिल्म प्रमोशनमा लाग्नुपर्ने समूह आफ्नै मुख्र्याईका कारण अहिले माफि माग्दै हिड्नु परेको छ ।